Isinxibo esiqhelekileyo seVeracruz, ukuhlanganiswa phakathi kweenkcubeko zaseMexico naseSpain | Iindaba Zokuhamba
ULuis Martinez | 13/04/2021 09:54 | isiko, Mekhsikho
Isinxibo esiqhelekileyo saseVeracruz siphendula, kwelinye icala, kwi-substrate ene-autochthonous yeli lizwe laseMexico kwaye, kwelinye icala, kwimpembelelo yabakholoniyali baseSpain. Kuyinyani ukuba zonke iidolophu ezikummandla waseVeracruz kunye nelizwe lonke babe neyabo iimpahla eziqhelekileyo, kodwa kukho isuti echaza ilizwe kunye nekomkhulu lalo.
Kuba iVeracruz kunxweme olusempuma lwe Mekhsikho kwaye inemozulu efudumeleyo yetropiki, iimpahla zayo eziqhelekileyo kufuneka, ngokunyanzelwa, zikhanyiswe kwaye zingafudumali kakhulu. Iqondo lobushushu eliphakathi elingaphezulu kwamashumi amabini amadigri alinakunyamezelwa unyaka wonke ngeempahla ezishushu. Kodwa zininzi ezinye izinto ezimisele Isinxibo esiqhelekileyo saseVeracruz. Ukuba ufuna ukubazi, siyakumema ukuba uqhubeke nokufunda.
1 Imbali yesinxibo esiqhelekileyo seVeracruz
2 Injani isuti ye-jarocho
2.1 Isinxibo esiqhelekileyo seVeracruz kwabasetyhini
2.2 Isinxibo esiqhelekileyo seVeracruz yamadoda
3 Isetyenziswa nini impahla yokunxiba yejarocho
Imbali yesinxibo esiqhelekileyo seVeracruz
Into yokuqala ekufuneka sikuxelele yona kukuba imeko yaseVeracruz ikwasebenzisa charro isuti kunye Impahla yokunxiba ye Tehuano. Le yokugqibela yayisetyenziswa ngabafazi baseZapotec belizwe lase Oaxaca kwaye wabulawa ngumzobi UFrida khalo kwimizobo yakhe emininzi. Kodwa zombini ezi kunye neyokuqala ziye zaba ziimpawu zehlabathi zaseMexico. Ke ngoko, ayimangalisi into yokuba baqhelekile kwiVeracruz.
Ngaphandle kwayo yonke into esichaze nje kuwe, isinxibo esiqhelekileyo seVeracruz par ukugqwesa kuyabizwa isuti yejelocho, evela kulokho kubizwa ngokuba ISotavento VeracruzanoOko kukuthi, ngommandla waseburhulumenteni ngaloo ndlela uhlelwe ngokwandiswa ngasemazantsi omnye. Le ngubo inembali enomdla kakhulu.
Kuthiwa abafazi bokuqala bafika kunye nabaseSpain kwi Isitya sasePapaloapan babehlala benxiba iimpahla ezivela ePeninsula yaseIberia. Babenjalo Isinxibo sesinxibo seAndalusian okanye iLevantine yenziwe ngamalaphu amnyama kwaye anzima. Kodwa kule ndawo yeVeracruz, njengoko sikuxelele, kushushu kakhulu kwaye, ukongeza, ubumanzi bukhona. Ngenxa yoko, iimpahla ezazivela eSpeyin zazingafanelekanga, kuba zazenzelwe imozulu ebandayo.
Ezi suti zamabhinqa zineziketi ezimibalabala, ifaskoti efekethisiweyo, ishawl yeleyisi, amasokisi amqhaphu nezihlangu zevelvet. Ukongeza, babehonjiswe ngeembasa ezinamathele entanyeni ngeeribhoni zesilika okanye ivelvet uqobo.
I-Veracruz isinxibo esiqhelekileyo sabasetyhini
Nangona kunjalo, abafazi bomthonyama babenxiba iziketi ezineentyatyambo kunye neeblawuzi ezinelinen ye-bobbin kwaye bagxotha amagxa, kunye nezihlangu ezimile okwee-clogs. AbaseSpain bayayiqonda indlela kufanelekile ngakumbi le mpahla yemozulu yaseVeracruz kwaye baqala ukushiya iilokhwe zabo ababeze nazo eSpain.
Njengomxube wesinxibo sendawo kunye neempembelelo ezithile zaseSpain, i isuti yejelocho, ezamkele iifom ezifanayo kumadoda. Kwakunjalo, Inkqubo yokudibanisa phakathi kwefashoni ye-peninsular kunye neyomthonyama evela eSotavento Veracruzano. Ukongeza, izixhobo kunye nezinto zokuhombisa zongezwa kuyo.
Nje ukuba senze imbali encinci, lixesha lokuba sichaze ngokuthe gca kwaye ngokweenkcukacha ukuba injani indleko yeVeracruz.
Injani isuti ye-jarocho
Ngokusengqiqweni, ukuchaza isinxibo esiqhelekileyo saseVeracruz, kufuneka sahlule phakathi kwempahla yabasetyhini kunye naleyo yamadoda. Nangona kunjalo, zombini zineempawu ezimbini ezifanayo: umbala omhlophe kunye namalaphu alula efanelekileyo kubushushu.
Isinxibo esiqhelekileyo seVeracruz kwabasetyhini
Iimpahla zeJarocha zabafazi umhle nangakumbi ngaphezu kwento eyenzelwe amadoda, kuba ikwenzile ngakumbi ngentambo, umsebenzi oyimfakamfele kunye nokuhombisa. Izinto ezisisiseko zale ndleko zilandelayo:
I-blouse yohlobo ingubo yokulala ezimhlophe ezenziwe ngomqhaphu kunye ne "mesh" emagxeni nasesifubeni. Oku kuthetha ukuba, kula macandelo, anokuhonjiswa ngohlobo lwegridi. Ukongeza, igqityiwe entanyeni nge-barrette eyenziwe ngeribhoni yesilika.
I-Petticoat nayo imhlophe kwaye ibhijelwe ezantsi esetyenziswa njengemvelaphi.
Omnye isondo inde kakhulu kwaye inde kakhulu ngaphezulu kwepitikoti egubungela amaqatha kwaye ehlala imhlophe. Ngokunjalo, ihonjiswe ngayo oyimfakamfele kwaye zihlala zikhona intwana yeglu.
Ifaskoti mfutshane nge-velvet emnyama kwaye ihonjiswe ngeentyatyambo ezibomvu-zetoni kunye nentambo ejijekileyo. Ibotshelelwe esinqeni ngendlela ye- iribhoni yesilika kwaye ebhinqeni lakhe kukho bandana yenziwe ngomqhaphu, oko kukuthi, itshefu enkulu eyenziwe ngelaphu eliprintiweyo elinemibala emibini.
Omnye imantilla okanye i-shawl enokwenziwa nge-lace okanye nge-tulle edibeneyo. Ibekwe emagxeni abotshelelwe esifubeni ngendlela ye- ilokethi okanye i-cameo ukuqaqambisa umnatha welokhwe yokulala ngaphantsi.
Un itshali okanye i-shawl yesibini yenziwe kakuhle ngentambo yesilika kwaye idityaniswe neribhoni ehombisa iinwele.
Ibhinqa elinxibe isinxibo sejarocho
Kunye nako konke oku kungasentla, isinxibo esiqhelekileyo saseVeracruz sabasetyhini siquka izixhobo ezahlukeneyo y iinwele ezithile. Ngokumalunga neyokugqibela, iqulathe i-bun kunye neebhondi ezimbini ezihonjiswe ngentloko njengekama, ekwabizwa ngokuba cachirulo. Okokugqibela, iinwele zihonjiswe ngegardenias okanye iiroses ezibekwe kwelinye icala okanye kwelinye entloko kuxhomekeke kwisimo somtshato somntu. Ukuba akatshatanga, baya ngasekhohlo, ngelixa atshatileyo esiya ngasekunene.
Ngokubhekisele kwimpahla yeVeracruz eqhelekileyo yabasetyhini, a fan zixhonywe entanyeni kusetyenziswa i ikhola. Oku kuhlala kuyigugu losapho. Ingenziwa ngegolide okanye iiparele, kodwa kunye neekorale okanye iifiligree. Okokugqibela, ngamanye amaxesha umnqamlezo unxitywa ngentambo ngentambo yevelvet.
Isinxibo esiqhelekileyo seVeracruz yamadoda
Ezininzi lula ngakumbi ukuba oku kungasentla sisinxibo esiqhelekileyo samadoda eVeracruz. Nangona kunjalo, intle kakhulu kwaye, njengoko sikuxelele, ime ngaphandle kombala omhlophe wazo zonke iimpahla. Kule meko, ezona zibalulekileyo zezi zilandelayo:
Un iibhulukhwe Yenziwe ngelaphu elitsha elifikelela ezinyaweni, oko kukuthi, ngokungafaniyo nezinye iimpahla eziqhelekileyo, alikho ibhegi okanye ubude bamadolo.
Omnye guayabera okanye ihempe enemikhono emide, ekhululekileyo kunye neyenziwe ngelaphu elikhanyayo eneengxowa ngaphambili. Ikwahlala ikucela ukuyinika ubuhle bayo.
Chwetheza izihlangu ukuphanga kunye nombala omnyama okanye omhlophe.
Umnqwazi wesundu ngemilenze emine kwindawo yayo ephezulu (oko kubizwa ngokuba "ngamatye").
I-Palliate okanye itshefu enkulu enemibala eqaqambileyo, ngokukhethekileyo ibomvu kwaye imnyama, entanyeni.
Njengoko besichazile kuwe kwaye unokuthatha isigqibo kwinkcazo yethu, isinxibo esiqhelekileyo seVeracruz samadoda sincinci kakhulu kunaleso sabasetyhini. Nangona kunjalo, Idibanisa ngokugqibeleleyo nale.
Iqela labemi baseVeracruz ngendleko eqhelekileyo
Isetyenziswa nini impahla yokunxiba yejarocho
Ngokubanzi, isinxibo sejarocho sisetyenziswa kwi nawuphina umcimbi we-folkloric okanye iholide ebhiyozelwa kwiphondo laseVeracruz. Amaqela amaninzi emidaniso yesintu ayisebenzisa, ngokuchanekileyo, ukutolika Ziyi-jarocho okanye i-zapateado. Zimbini iintlobo zemidaniso: izandi ezibini kwaye oko kubizwa "Ukusuka kwimfumba" yokudanisa kwiqela.
Umculo ohamba kunye nawo udlalwa kunye izixhobo zemveli ngokulinganayo Njenge jarana, ikatala encinci; into efunekayo, iphuma kusapho olunye nolwangaphambili; Uhadi, intambula, umhlathi wedonki, kunye nentsimbi. Kuzo zonke zichazwa iingoma ezinemvelaphi yamahlwempu, ezinye zazo ziye zaduma kwihlabathi liphela. Umzekelo, La Bamba, Umqhubi o Isiraphu ephambeneyo.
Zikwatolikwa huapangos, iingoma ezikwixesha le-ternary utyikityo oluvela kwingingqi, kunye nezingqisho zemvelaphi yase-Afro-Caribbean ezinje nge danzón edumileyo yaseCuba.
Kwelinye icala, uya kuba nomdla wokwazi ukuba yenzeka nini le mibhiyozo. Ke, ukuba uceba ukutyelela iVeracruz, ungenza uhambo lwakho luhambelane nabo. Omnye wemihla ebonisiweyo ngu yomkhosi ukusuka kwisixeko saseVeracruz uqobo, esichazwa njengeyona "yonwabileyo emhlabeni."
Kodwa ilizwe laseJarocho lifumene indawo yokuhlala kwisixeko sase Jaltipan, kwilizwe laseVeracruz uqobo. Ekupheleni konyaka le dolophu iququzelela Umnyhadala weFandango, edibanisa amagcisa omculo athandwayo avela kwilizwe liphela nakwamanye amazwe. Ke ngoko, izandi kunye nemidaniso ye-jarocho ayinakubakho kulo msitho.
Kwangokunjalo, isithethe saseJarocha sineengcambu ezinzulu kwisixeko saseCórdoba, ekwabizwa ngokuba siso ILomas de Huilango, ukuya kwinqanaba lokuba icwangcise Ukudibana koNyana uJarocho equka imiboniso kunye nesinxibo esiqhelekileyo saseVeracruz. Kodwa ke neminye imisebenzi enje ngeeworkshops, iintlanganiso, iinkomfa kunye nemisebenzi yegala ukugcina le nkcubeko yesiko laseVeracruz.
Okokugqibela, siza kukuxelela malunga nesixeko sase I-Tlacotalpan, ebekwe ngokuchanekileyo kwimida yesitya sasePapaloapan, apho, njengoko sikuxelele, isinxibo sejarocho sazalwa. Kule dolophu intle, iziko layo eliyimbali libhengeziwe Inkcubeko elilifa lethu kuLuntu, ibhiyozelwa nge Intlanganiso yeJaraneros kunye neDemimistas. Ngumthendeleko ozinikele ekugcineni zonke iingoma zomculo eziqokelelwe kwindodana yonyana kwaye iphakathi kweziganeko ezibaluleke kakhulu kwi-folkloric kuyo yonke iMexico.
Ukuqukumbela, sikuchazile ukuba yintoni imvelaphi ye- Isinxibo esiqhelekileyo Veracruz, kunye neengubo ezenza ukuba babhinqele kunye nabesilisa. Kwaye, ngokufanayo, yeyiphi imithendeleko eyaziwayo ukuyinxiba. Ngayiphi na imeko, yenye yeempahla zesiko zendele ngakumbi kwaye ziyaxatyiswa kwilizwe lonke laseMexico.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » America » Mekhsikho » Isinxibo esiqhelekileyo saseVeracruz